Budada caanaha (3-55-06) hplc = 1% | Nacnac AASraw Fat Tukasho
T3 (Cytomel) budada
/ Products / Qaar kale waxay / Cytomel (T3) budada
Rating: SKU: 55-06-1. Category: Qaar kale waxay
AASraw waxay ku jirtaa karti iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa nidaam qoto-dheer oo budada Cytomel (T3) (55-06-1), iyadoo la raacayo nidaamka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
VIDEO (Cytomel) (T3) video budada ah
Cytomel (T3) budada characters
Name: Cytomel (T3) budada
Qaaciddada Molecular: C15H11I3NNaO4
Miisaanka kelli: 672.96
Dhibcaha Biyaha: 205 ° C
Color: Baraf cad ama madmadow
Isticmaalka budada Cytomel (T3)
Noocyada kala duwan ee Cytomel
Budada Cytomel (CAS 55-06-1) oo loo yaqaanno Cytomel, Cynomel, Cyronine, Cytomel Tabs, Euthroid, Linomel, Liothyronin, Neo-Tiroimade, Ro-Thyronine, budada T3, Tertroxin, Thybon, Ti-Tre, Tiromel, Tironina , iyo Trijodthyronin.
Isticmaalka budada budada ah T3
Budada T3 marar dhif ah ayaa iskeed loogu qoraa si wax looga qabto dhibaatooyinka tayroodhka; waxaa badanaa lagu qoraa T4. Waagii hore, cytomel wuxuu ahaa daaweyn jadwal ah oo loogu talagalay buurnaanta; si kastaba ha noqotee, kororka dhibaatooyinka wadnaha iyo walbahaarka wadnaha ayaa qasbay ka-noqoshada T3 dalabkaas.
T3 waxay ka shaqeysaa heerarka gacanta iyadoo kor u qaadaysa dheef-shiid kiimikaadka, carbohydrates, iyo dufanka, iyo sidoo kale kordhinta garaaca wadnaha iyo socodka dhiigga. T3 waa bubur aad u wanaagsan oo gubanaya tan iyo markii aad isticmaashay dheef-shiid kiimikaad sarreeya intaad isticmaaleysid.
Tani waxay ka faa'iideysaneysaa jir-dhiseyaasha sababtoo ah waxay awoodi karaan inay ku jiraan kaloori sare ka hor intaan la tartamin tan iyo markii ay gubi doonaan kalooriyo xad-dhaaf ah oo leh heerka dheef-shiid kiimikaad sarreeya Laakiin xusuusnow, T3 waa catabolic (waxaad u lumin kartaa muruqyada muhiimka ah) iyo isticmaalka muddada-dheer wuxuu yareyn karaa cufnaanta lafaha sidoo kale.
Cytomel (CAS 55-06-1) waxaa ugu fiican in la qaato dhowr jeer maalintii. Heerarka T3 waxay sare u kici doonaan qiyaastii 2 saacadood ka dib qaadashada waxayna ku dhammaanayaan 4 saacadood gudahood. Si loo wanaajiyo helitaanka T3 iyo dayactirka heerarka T3 maalintii oo dhan, qaadashada badan waa tallaabo lagula taliyay.
Qiyaaso badan ayaa kaa ilaaliya inaad ku tiirsanaato wadarta guud ee jirkaada oo beddelaya T4 ilaa T3.
Inkasta oo T3 aysan ahayn steroid, waxaa jira caddayn muujin ah oo ah in T3 ay kordhiso isticmaalka steroid. Tani waxay noqon kartaa mid macquul ah sababtoo ah tirada kordheysa ee metabolismka marka la isticmaalayo T3.
Waxaad inta badan ka akhrisan doontaa jir-dhiseyaashu waxay ku xiran tahay T3 oo leh wareegga anomolytka. Intaa waxaa dheer, clenbuterol waa badeecad kale oo badanaa lagu xakumo T3 si loo sameeyo nidaam aad u wanaagsan, oo leh nidaam hor leh oo dufan leh.
Inta badan jir-dhiseyaashu waxay u isticmaaleen daawadan si badbaado leh oo wax ku ool ah. Waxaa jira sheekooyin ku saabsan dadka dhibaatooyinka ku qaba qanjirka 'qanjirka' oo la xidho ka dib isticmaalka T3. Laga soo bilaabo baadhitaanka suugaanta, waxay umuuqataa in soo kabashada ay tahay dhacdo macquul ah, haddii aysan jirin saadaal hidde ah oo loogu talagalay cudurka qanjirka 'thyroid'.
Digniin ku saabsan budada Cytomel
Kaalmada gaarka ah ee taageerada tayroodhku waa arrin kale. Badanaa waa la qoray oo lagu qancay oo ku saabsan guggulsterones iyo forskolin. Qoraallada ayaa sheegaya in kobcinta wax soo saarka tayroodhka labadaba, hase yeeshee, habka tooska ah ee ficilku lama go'aamin.
Dhibaatooyin culus oo kala duwan ayaa isticmaala labadaba ama labadaba.
Shakhsi ahaan, waxaan rumeysanahay in ay waxoogaa ku kordhinayaan waxqabadka tayroodh iyo dib-u-hagaajinta qiyaasta thyroid-ka ee celceliska qiyaasta faa'iidooyinka badan ee laga dheefay. Si kastaba ha noqotee, waxaa laga yaabaa inay door muhiim ah ka qaataan dib u soo kabashada qanjidhada qanjirada ka dib wareega T3.
Isticmaalka hormoonka koritaanka (GH) iyo T3 waa in sidoo kale la tixgeliyaa. Kororka caadiga ah ee xajinta nitrogen ee la xidhiidha isticmaalka GH ayaa la tirtiraa marka heerka T3 uu kordho.
Saameyntan waxaa loo aaneeyay T3 (CAS 55-06-1) heerarka sii kordhaya ee insulin sida cunsurka koritaanka cunsuriyada ku xiran, sidaas awgeedna yareyneysa bioavailability-ka igf-1 (5). Hormarka koritaanka wuxuu horeyba u leeyahay tayo gubasho dufan leh, sidaa darteed waxay umuuqataa mid aad uga qaalisan inaadan isticmaalin T3 isla mar ahaantaana GH.
Cytomel waa daroogada dheef-shiid kiimikaadka oo si sahlan loo isticmaali karo si loo yareeyo faashadda xad-dhaafka ah ee jirka. Dhab ahaantii, waxay ka shaqeysaa iyada oo la beddelayo hoormoonka tayroodh dabiiciga ah. Cytomel T4 wuxuu sii kordhiyaa heerka dheef-shiid kiimikaad ee jirka wuxuuna bixiyaa quwad weyn oo loogu talagalay dheefinta cuntada. Marka si joogto ah loo qaato, steroid waxay ka caawisaa qofka inuu hoos u dhigo miisaankiisa ama sidoo kale wuxuu ka caawinayaa inuu ku raaxeysto duruufaha caafimaad qabta.
Waxaan si cad u arki karnaa in ay jiraan faa'iidooyin badan oo isticmaalka Cytomel si loo yareeyo heerarka dheef-shiid kiimikaadka. Waxay sii kordhisaa awooda jidhka si loo soo saaro borotiinka. Laakiin waxa guud ahaan la arkaa waa in ay u dhaqmaan sida loola jeedo marka aan la maamulin steroids anabolic.
Xaqiiqdii waxa badanaa la soo dhaafay oo la isugu darey cunto cunnada ka horeysa sababta oo ah waxay leedahay sumcadda duxda jidhka ama dufanka xaydhka ah sida loogu yeero jir-dhisidda. Waa dufan aan dooneynin inuu kaa tago maalmo yar oo la soo dhaafay. Cytomel wuxuu u adeegaa inuu aad u jecel yahay haweenka jidhka ah. Maadaama dumarku ay leeyihiin dheef-shiid kiimikaad hooseeya marka la barbardhigo ragga, waa arrin aad u adag in ay helaan dhabta saxda ah ee tartanka, taas oo ah heerarka maanta. Kaloorida iyo cuntada oo hoos udhaca kalorie / maalin 1000 ayaa laga hortagi karaa adigoo isticmaalaya Cytomel. Shaki la'aan, haweenku runtii way u nugul yahiin inay waxyeelo ka soo gaaraan ragga, laakiin guud ahaan waxay si wanaagsan ula qabaan xNUMX mcg maalintii. Waxaa muhiim ah in daroogada aan la qaadin toddobaadkii XNUM ama wax kale. Ugu yaraan 50 bilo ka-dhaaf ah Cytomel waa in la raaco. Dadka qaata qiyaasta daawada qiyaasta dheer ee muddada dheer waxay ku jirtaa halista ah inay qaaddo tayroodh joogta ah.
Dhinaca jidhka jirka, Cytomel waxaa inta badan loo isticmaalaa daroogada luminta. Hormoodka tayroodhka waxaa loo yaqaan 'regulators' ee jidhka. Heerka sare T3 wuxuu kor u qaadaa dheef-shiid kiimikaadka guud, taas oo u oggolaanaysa in isaga ama iyada la gubo kalooriyo badan iyo in ay isticmaalaan kaloriyadaha ka filan.
Ka hadlidda qiyaasta, mid ayaa u baahan inuu si taxadar leh u eego sida Cytomel uu yahay hoormoon tayo leh oo xoog leh oo xoog leh. Waa arrin aad muhiim u ah in qofku bilaabo qiyaas yar, oo si tartiib tartiib ah u kordha oo si sax ah u socdo muddada dhowr maalmood ah. Inta badan ciyaartoyda waxay bilaabaan inay qaataan 1 25mcg tab maalin kasta ka dibna kordhinta qiyaasta 3 ee 4 maalmo 1 oo ay sameeyaan 100 dheeraad ah oo kiniin ah. Qiyaasta qaar ka sarreeya xNUMX mcg maalintiiba ma aha mid muhiim u ah sidan oo kale xitaa lama talin.
Daawada budada ah T3
Suuq-geynta Ganacsiga Cytomel
Sida loo iibsado budada Cytomel: iibso budada T3 (CAS 55-06-1) AASraw
Budada ah ee Levothyroxine (T4)
Methandrostenolone (Dianabol) budada
Testosterone Cypionate budada
Isticmaal lab ah (1)
Galmada Horumarinta Deedaha (4)
Xabbad dufan leh (6)